Madaxweyne Muuse Biixi oo iftiimiyey Caqabadaha ugu waaweyn ee Xukuumaddiisu horyaalla iyo Qorsheyaasha uga dejisan wax-ka-qabashadooda - Somaliland Post
Home News Madaxweyne Muuse Biixi oo iftiimiyey Caqabadaha ugu waaweyn ee Xukuumaddiisu horyaalla iyo...
Madaxweyne Muuse Biixi oo iftiimiyey Caqabadaha ugu waaweyn ee Xukuumaddiisu horyaalla iyo Qorsheyaasha uga dejisan wax-ka-qabashadooda
Nuxurka Qodobbadii ugu muhiimsanaa Khudbaddii uu maanta jeediyey Madaxweynaha Somaliland
Hargeysa (SLpost)- Madaxweynaha Somaliland Md Muuse Biixi Cabdi oo khudbad dhinacyada kala duwan xambaarsan ka jeediyey madal il-yartu is-qabatay oo xilka loogu dhaariyey maanta, ayaa si faahfaahsan u taabtay caqabadaha wax-ka-qabashada u baahan ee xilligan hortaagan xukuumaddiisa iyo tallaabooyinka ugu horreeya ee u qorshaysan inuu wax kaga qabato.
Md Muuse Biixi Cabdi waxa uu xusay inay xilligan dalka ka jiraan aafooyin qaran oo ay ka mid yihiin musq-maasuqa, qabyaaladda, sicir-bararka iyo shaqo-la’;aanta, kuwaas oo u sheegay inay baahan yihiin wax-qabasho ay u xukuumaddiisa hiigsanayso suulinteeda, kuwaas oo xal-u-helistooda uu sheegay inaanu kaligii wax ka qaban karin balse loo baahan yahay shacabka Somaliland inay u midoobaan.
Md Muuse Biixi oo arrimahan ka hadlayay, waxa uu yidhi, “Somaliland guulo ayey gaadhay 26–kii sanno ee tagay, dalkani wuxuu ka soo kabtay dagaalkii dib-u-xoraynta, waxa aynu bogsiinay qardoofooyinkii dhexdeena ka dhacay. Waxa innoo dhismay dal nabdoon, xasilloon oo dimuqraadi ah.
Waxa aynu ku guulaysanay in aynu dhidibbada u adkayno amniga Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, dawladnimo loo dhan yahay iyo dimuqraadiyad hana-qaaday.”
Md Muuse Biixi oo hadalkiisa sii watay, waxa uu intaas ku daray, “Walaalayaal, iyada oo intaa iyo in ka badani innoo qabsoomeen, haddana waxa jirta qabyo badan oo dalkeenu leeyahay. Qabyooyinka qarankeena waxa ka mid ah:
In Shillinka Somalilandnoqdo lacagta rasmiga ah ee dhex wareegta suuqyadda Jamhuuriyadda Somaliland, waxna lagu kala iibsado.
Kor-u-qaadista wax-soo-saarka dalkeena ee dhinacyada: Xoolaha, Beeraha, Kalluumaysiga, Xabkaha iyo Faleenka.”
Madaxweynaha oo ka hadlay qorsheyaasha shaqo-abuurka ee xukuumaddiisa, waxa uu yidhi, “Dalkeenu waxa uu maanta leeyahay Dhallinyaro badan oo aqoon leh, balse intooda badan dhallinyaradda dalkeenu way shaqo la’yihiin. Xukuumadda cusubi waxay dhiirrigalinaysaa maalgashiga, wax wada-yeelashada iyo midnimadda shacabka Jamhuuriyadda Somaliland, si shaqo loogu abuuro dhallinyaradda dalkeena. Xukuumadda cusubi waxa ay casriyeyn doontaa hay’adaha dawladda. Xukuumadda cusubi waxay hirgelin doonaa nidaam hawl-gabka dadka waaweyn ee u soo shaqeeyey Qarankooda. Dhallinyaradda Jamhuuriyadda Somaliland ee dhammaysata Jaamacaduhu waxay qaadan doonaan 6 bilood oo ah SHAQO QARAN, si ay u helaan waayo-aragnimo shaqo.”
Mar uu ka hadlayey Kobcinta dhaqaalaha Dalka iyo La-dagaalanka Musuqmaasuqa, waxa uu madaxweynuhu yidhi, “Xukuumadda cusub waxa ay u abuuraysaa ganacsatada iyo shirkadaha jawi iyo siyaasado dhiirrigeliya maal-gashiga, iyada oo ballanqaadaysa in hantida ganacsatadu hesho ammaan buuxa.” Isagoo hadalkiisa sii watay , waxa uu intaas ku daray oo yidhi, “Musuq-maasuqu waa AAFO QARAN oo mudan in aan Qaranimo iyo midnimo ku dabar-goyno. Musuq-maasuqu waa xaaraan, ciddii ku kacda ama sahashaa waa DAMBIILE QARAN oo mudan ciqaab.
Madaxweynuhu waxa kale oo uu ka hadlay wax ka-qabashada Garsoorka, waxa uu yidhi, “Xoojinta iyo tayeynta Garsoorka Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay qayb laxaad leh ka tahay sidii sharcigu u sarrayn lahaa, nidaamka dawladnimada waxa uu siinayaa kalsooni. Xoojinta Garsoorku waxa ay kordhinaysaa la xisaabtanka iyo daba-galka hay’adaha dawladda.”
Md Muuse Biixi waxa kale oo uu ka hadlay Doorashadii Madaxtooyada iyo Xanafteedii, waxaanu yidhi, “Waxaan diyaar u ahay oo tallaabooyinkeedii u horreeyeyna aan qaaday oo haddana aan wadaa in wax allaale iyo wixii xanaf ka dhashay Doorashadii Madaxtooyada ee dalka ka qabsoontay in aan bogsiiyo oo weliba aan diyaar u ahay in aniga la igu jiifsado iyo xisbiga KULMIYE lagu jiifsado oo walaalahayaga waxtirsanaya aannu bogsiino, iyagana waxa laga rabaa walaalahayaga waxtirsanayaa inay garqaataan, wax baan kaa tirsanayaa kuuna soo fadhiisanmaayo innama kala qabato, dhaqana umaynu lahayn.”
Madaxweynuhu isaga oo khudbaddiisa sii watay, waxa uu ka hadlay qorsheyaasha xukuumaddiisa, waxaanu yidhi, “Xukuumadda cusubi maaha meel xil la isku magacaabo oo dano gaar ah lagu fushanayo, xukuumadda aannu soo wadnaa noqomayso meel lagu badhaadho oo qofku ka taajiro.
Waxaan ballan idiinku qaadayaa qofka kasta oo aannu u soo magacaabo oo ka mid noqda golaha wasiirrada ama hay’adaha kale ee dawladda in hawsha loo dhiibay lagula xisaabtami doono waqti iyo maalba. Waxaan idiin ballanqaadayaa inta qof bani’aadam ahi ku dadaalo in aannu ku shaqayno sinnaan iyo caddaalad oo xukuumadda aan soo dhisi doonaa ay dhex u noqoto Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan, masuulka xil ka hayaana waa masuul Qaran, maaha inuu u adeegayo cid ama koox gaar ah.
Isagoo ka hadlayey Xukuumaddiisa iyo xidhiidhka beesha Caalamka, waxa uu yidhi, “Waxa aannu si buuxda oo aan baydh-baydh lahayn u raacnay tubtii iyo miqyaaskii beesha caalamka uga yaalay geedi-socodka Dimuqraadiyadda.
Intaas oo tallaabo oo Qarankani hore u qaaday, bulshada caalamka waxa aannu uga fadhinaa in ay garwaaqsato xaqiiqada hortaala ee ah in Jamhuuriyadda Somaliland xaq u leedahay inay hesho ictiraaf caalami ah.”
Madaxweynuhu waxa uu ugu dambayn baaq u jeediyey shacabka Somaliland, “Hawlahaas oo dhan sahal ku hirgali maayaan. Shacab iyo xukuumadba waxa aan codsanayaa in gacmaha la is-qabsado, danta guudna laga hormariyo danta gaarka ah, si aan u tirtirno dib-u-dhaca iyo saboolnimadda.” Sidaas ayuu yidhi Muuse Biixi Cabdi.